Bit By Bit - imibuzo Ukubuza - 3.6 Imibuzo ehlobene nemithombo emikhulu yedatha
Ukuxhumanisa izinhlolovo emithonjeni emikhulu yedatha kukuvumela ukukhiqiza izilinganiso ezingenakwenzeka ngomthombo wedatha ngabanye.
Iningi lezinhlolovo zemizamo yokuzimela yodwa. Abazakheli komunye nomunye, futhi abazisebenzisanga yonke enye idatha ekhona emhlabeni. Lokhu kuzoshintsha. Kukhona okuningi okungazuzwa ngokuxhumanisa idatha yocwaningo kumithombo emikhulu yedatha echazwe esahlukweni 2. Ngokuhlanganisa lezi zinhlobo ezimbili zedatha, ngokuvamile kuvame ukwenza okuthile okungenakwenzeka ngabanye ngabanye.
Kunezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene lapho idatha yocwaningo ingahlanganiswa nemithombo emikhulu yedatha. Kulesi sigaba, ngizochaza izindlela ezimbili eziwusizo futhi ezihlukile, futhi ngizokubiza ngokuthi ziceliwe zicele futhi zikhuliswe ngokucela (isibalo 3.12). Nakuba ngizobonisa indlela ngayinye ngesibonelo esicacile, kufanele uqaphele ukuthi lezi yiziphequluli ezijwayelekile ezingasetshenziswa ngezinhlobo ezahlukene zedatha yokuhlola kanye nezinhlobo ezahlukene zemininingwane enkulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele uqaphele ukuthi ngayinye yalezi zibonelo ingabhekwa ngezindlela ezimbili ezahlukene. Uma ucabanga ngemibono esahlukweni 1, abanye abantu bazobheka lezi zifundo njengezibonelo ze-"custommade" idatha yokucwaninga idatha ekhulisa "readymade" enkulu, futhi abanye bayobabuka njengezibonelo ze-"readymade" idatha enkulu yokuhlola idatha "yesilondolozi". Kufanele ukwazi ukubona kokubili ukubukwa. Okokugcina, kufanele uqaphele ukuthi lezi zibonelo zicacisa kanjani ukuthi izinhlolovo nemithombo emikhulu yedatha iyagcwaliseka futhi hhayi izakhi.
Umdwebo 3.12: Izindlela ezimbili zokuhlanganisa imithombo emikhulu yedatha kanye nedatha yokuhlola. Ekuceleni okucebile (isigaba 3.6.1), umthombo omkhulu wemininingwane unesilinganiso esiyinhloko sentshisekelo futhi idatha yocwaningo yenza ukwakheka okudingekayo nxazonke. Ku-amplified ukucela (isigaba 3.6.2), umthombo omkhulu wemininingwane awunawo umthamo oyinhloko wesithakazelo, kodwa usetshenziselwa ukwandisa idatha yocwaningo.